Geelle oo Jabuuti ka furay tartanka cayaarta kubadda cagta ee gobollada - Sabahionline.com
Geelle oo Jabuuti ka furay tartanka cayaarta kubadda cagta ee gobollada Maarso 28, 2012
Madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle ayaa furay tartanka kubbadsa cagta gobollada, oo ka dhacaya Dikhil Isniintii (26-ka March) kaasoo ay kasoo qayb-galayaan shan gobol oo dalka ah, La Nation-ta Jabuuti ayaa arrintaa werisay. Qodobbo la xiriira
Ilaalada Jamhuuriga ah ee Jabuuti oo sharfay ninkii ku guulaystay nuska maaradoonka
Garsoorayaal ciyaareed oo Soomaali ah oo tababbar uga bilowday Jabuuti
Oradyahan reer Jabuuti ah oo ku guulaystay maaradoonka nuska ah ee Jabuuti
Jabuuti oo doonaysa in ay dhinto saaqidnimada da’ yarta
Madaxweynaha ayaa garoonka istaadiyamka Dikhil galay, isagoo calanka iyo calaamadda ololka ah ee midnimada ka qaatay labo dhallinyaro ah. Saraakiil dawladda ah iyo boqollaal dhallinyaro ah ayaa dhinacyada markaa ka riyaaqayey, ayay jariidaddu werisay. Tani waa markii ugu horraysay oo tartan heer cayaaro gobol ah lagu qabto Jabuuti. Xoghayaha Qaranka ee Dhallinta iyo Isboortiga, Jaamac Cilmi Cokiye ayaa sheegay in munaasabadaha isboorti ay tahay in lagu qabto dalka oo dhan, oo aanay caasimadda uun ku koobnaanin. Ka qaybgalka heer qaran looga wada qayb-qaato isboortiga kuma ekaan doono kubbadda cagta oo keliya, ayuu yiri Cokiye. "Waxaa jiri doona horyaallo kubbadda gacanta, kubbadda kolayga, iyo kubbadda laliska, iwm ah, markaana degmo kasta oo Jabuuti ku taal waxaa ka jiri doona horyaallo cayaarahaa kala duwan ah,” ayuu yiri wasiirku. Muxuu kula yahay qoraalkan?